Wax ka ogow falastiin Qalinkii Cabdi Cawiye | Baligubadlemedia.com
Falastiin reer falastiin ama dadka falastiiniyiinyu waxay ku hadlaan ama luqadahoodu yahay (Carab) (Af-Hebrow ama yahuudiga: ) waa wadan ku yaala bariga dhexe ee Qaarada Aasiya. Falastiin, waxa ay Xuduud la leedahay wadamada Masar, Urdun, suuriya, Lubnaan iyo Israaiil. Markii hore dhulka waxaa degenaan jiray carab falastiin ah iyo yahuud aad u yareed, waxaana lagu qiyaasaa in ee falastiinta ee gaarayaan in ka badan 8 miliyan oo qof, (dad tiriskii 1997), qaxootiga falastiinta waxee kala degenyihiin wadamada Urdun 3miliyan , Lubnaan 400,000 iyo wadamada kale ee carabta in kabadan 800,000 oo falastiin ah, Qaar neh waxee kala degenyihiin wadamada aduunka, Yurub, Ameerika, iyo Aasiya, Falastiinta badankooda ama 3diiba 1 waxuu ku jiraa Kaamamka qaxootiga.
Islaamka kaalin wayn ayay falastiin kuleedahay,waa dhulkii barakaysnaa ee ilaahay Qur’aankiisa ku sheegay,ilaahay suurada Isra waxa uu kusheegay “in Misaajidka Al-Aqsa iyo hareerihiisuba ay barakaysanyihiin”. Ilaahay markalale kitaabkiisa kariimka ayuu ku sheegay “Dhulka Falastiin marka uu yidhi kor ahaaye”